IGBO Beech Expeditor Mk.III FSX & P3D - Rikoooo
Zuru ezu ngwugwu nke beech Expeditor Mk.III na ụdị nke ugbo ala na nke ibu nwere wiil ma ọ bụ floats maka iji ya rụọ ọrụ kachasị. FSX or FSX-Tezọ. Prepar3D dakọtara. Edere ya na akwụkwọ na usoro na PDF. Zuru ezu ụlọ kobere zuru oke na ụlọ nke ihe atụ nke 3D zuru oke. Customda omenala, na-ahụ maka ọhụụ. Gụnyere ihe ndozi 4.
Onye edemede: Milton Shupe na ndi otu ya, Vladimir Gonchar